I-Sonoelectrolytic Hydrogen Production evela ku-Dilute Sulfuric Acid - Hielscher Ultrasound Technology
I-Electrolysis ye-dilute sulfuric acid ikhiqiza igesi ye-hydrogen negesi yomoya-mpilo. I-Ultrasonication inciphisa ukushuba kwesendlalelo se-diffusion ebusweni be-electrode futhi ithuthukise ukudluliswa kwesisindo ngesikhathi se-electrolysis. I-Ultrasonication ingakhuphula amazinga wokukhiqiza igesi e-hydrogen esitokisini se-electrolytic, kakhulu.
Amasethingi amabili wokuhlola ane-carbon anode kanye ne-titanium cathode achazwe ngezansi. Ukukhombisa imiphumela emihle ye-ultrasonication ku-electrolysis, i-titanium cathode iyi-sonoelectrode. Lokhu kungeza ukudlidliza kwe-ultrasonic kanye ne-cavitation ekukhiqizeni i-electrolytic ye-hydrogen ne-oxygen kusuka ekunciphiseni i-sulfuric acid. Ukuhlanganiswa kwe-ultrasonics nogesi kusetshenziswa ku-sonoelectrochemistry, sonoelectrolysis kanye ne-sonoelectrosynthesis.
I-Hielscher ultrasonic homogenizer UP100H (i-100 watts, i-30kHz) ifakwe ukuthuthukiswa kwe-sonoelectrochemical. Lokhu kuvumela ukusebenzisa i-sonotrode njenge-cathode noma i-anode kunqubo ye-electrolytic. Okwe-setups sonoelectrolytic yezimboni, sicela uchofoze lapha!
Sonoelectric Cathode ku-UP100H iprosesa le-ultrasonic
Isethaphu ye-Sonoelectrolysis 1 – Uhlobo lwe-H Iseli Elingahlukanisiwe
Ukusetha kusebenzisa i-dilut sulfuric acid (H2SO4, 1.0M). Iseli elihlukaniswe ngohlobo H lifakwa i-electrolyte. Leli seli laziwa njengeHofmann Voltameter. Inamatilinda engilazi amathathu ahlanganisiwe. Isilinda sangaphakathi sivuliwe phezulu ukuvumela ukugcwaliswa nge-electrolyte. Ukuvula ama-valve phezulu kwamashubhu angaphandle kuvumela noma iyiphi igesi ukubaleka ngesikhathi sokugcwaliswa. Esitokisini se-electrolytic, ama-electrode avalwa ngamasongo enjoloba futhi afakwa abhekiswe phansi esixazululweni samanzi ane-acid. I-anode electrode enhle yenziwe ngekhabhoni (8mm). I-cathode engalungile iyi-sonoelectrode ye-titanium ultrasonic (10mm, sonotrode ekhethekile yendawo ephezulu, i-Hielscher UP100H, i-100 watts, i-30kHz). I-titanium sonoelectrode ne-carbon electrode ayisebenzi. Ukuhlolwa kwe-Electrolysis kuzokwenzeka kuphela lapho ugesi udluliswa ngesisombululo se-sulfuric acid. Ngakho-ke, i-anode yekhabhoni ne-titanium cathode zixhunywe kunikezelo lwamandla kagesi aqhubekayo (okuqondile manje).
Igesi le-hydrogen negesi yomoya-mpilo ekhiqizwa ku-electrolysis ye-dilute sulfuric acid iqoqwa kumashubhu angaphandle aphumelele ngaphezu kwe-electrode ngayinye. Umthamo wegesi ususa i-electrolyte kumashubhu angaphandle, futhi ivolumu yegesi eyengeziwe ingalinganiswa. Isilinganiso sethiyori yevolumu yegesi ngu-2: 1. Ngesikhathi se-electrolysis, kususwa amanzi kuphela ku-electrolyte njengegesi ye-hydrogen negesi yomoya-mpilo. Ngakho-ke, ukuhlushwa kwe-sulfuric acid kunciphisa kancane ngesikhathi se-electrolysis.
Ividiyo engezansi ikhombisa i-sonoelectrolysis ye-dilute sulfuric acid isebenzisa i-pulsed ultrasonication (100% amplitude, cycle mode, 0.2 seconds on, 0.8 seconds off). Kokubili ukuhlolwa kwaqhutshwa ku-2.1V (DC, voltage njalo).
Le vidiyo ikhombisa ukukhiqizwa kwe-hydrogen sonoelectrolytic kuHofmann Voltameter
I-Sonoelectrolytic Hydrogen Production eHofmann Voltameter
Isethaphu Sonoelectrolysis 2 – Iqoqo Elilula
Isitsha sengilazi sigcwele i-electrolyte ye-dilute sulfuric acid (H2SO4, 1.0M). Kuleli seli elilula le-electrolytic, ama-electrode acwiliswa kusixazululo samanzi ane-asidi. I-anode electrode enhle yenziwe ngekhabhoni (8mm). I-cathode engeyona i-titanium ultrasonic sonoelectrode (10mm, MS10, Hielscher UP100H, 100 watts, 30kHz). Ukuhlolwa kwe-Electrolysis kuzokwenzeka kuphela lapho ugesi udluliswa ngesisombululo se-sulfuric acid. Ngakho-ke, i-anode yekhabhoni ne-titanium cathode zixhunywe kunikezelo lwamandla kagesi aqhubekayo (okuqondile manje). I-titanium electrode ne-carbon electrode ayisebenzi. Igesi le-hydrogen kanye negesi yomoya-mpilo ekhiqizwa ku-electrolysis ye-dilute sulfuric acid ayiqoqwanga kulokhu kusethwa. Ividiyo engezansi ikhombisa lokhu kusetha okulula kakhulu kusebenza.
Le vidiyo ikhombisa ukwenziwa kwe-sonoelectrolysis kwamanzi ukukhiqiza i-hydrogen ne-oxygen
I-Sonoelectrolysis Yamanzi kuya ku-Hydrogen ne-Oxygen
Sicela usebenzise ifomu elingezansi, uma ufisa ukucela imininingwane eyengeziwe maqondana nokusetshenziswa kwe-sonoelectrochemistry. Sizojabula ukukunikeza uhlelo lwe-ultrasonic oluhlangabezana nezidingo zakho.
Kwenzekani Ngesikhathi se-Electrolysis?
Ama-hydrogen ions akhangwa i-cathode engemihle. Lapho, i-hydrogen ion noma ama-molecule wamanzi ancishiselwa kuma-molecule egesi e-hydrogen ngenzuzo ye-electron. Ngenxa yalokho ama-molecule egesi e-hydrogen akhishwa njengegesi le-hydrogen. I-electrolysis yamanothi amaningi asebenzayo asebenzayo noma izixazululo ze-asidi ikhiqiza i-hydrogen ku-electrode ye-cathode engalungile.
Ion sulphate ions noma iminonjana ye-hydroxide ions idonsela ku-anode enhle. I-sulfate ion uqobo izinzile kakhulu, ukuze kungenzeki lutho. Ama-Hydroxide ions noma ama-molecule wamanzi akhishwa futhi ahlanganiswe ku-anode ukwakha i-oxygen. Lokhu kusabela okuhle kwe-anode kungukusabela kwe-oxidation electrode ngokulahleka kwe-electron.
Kungani Sisebenzisa Ukuhlanza I-Sulphuric Acid?
Amanzi aqukethe ukugxila kweminithi kwe-hydrogen ions ne-hydroxide ions, kuphela. Lokhu kukhawulela ukuqhutshwa kukagesi. Ukugxila okuphezulu kwe-hydrogen ions ne-sulfate ions kusuka ku-dilute sulfuric acid kuthuthukisa ukuqhutshwa kukagesi kwe-electrolyte. Ngenye indlela, ungasebenzisa isisombululo se-alkaline electrolyte njenge potassium hydroxide (KOH) noma i-sodium hydroxide (NAOH), namanzi. I-electrolysis yezixazululo eziningi zikasawoti noma i-sulfuric acid ikhiqiza i-hydrogen ku-cathode engalungile ne-oxygen ku-anode enhle. I-electrolysis ye-hydrochloric acid noma i-chloride usawoti ikhiqiza i-chlorine ku-anode.
I-electrolyzer iyithuluzi lokwehlukanisa amanzi abe yi-hydrogen ne-oxygen enqubeni eyaziwa ngokuthi i-electrolysis. I-electrolyzer isebenzisa ugesi ukukhiqiza igesi ye-hydrogen negesi yomoya-mpilo. Igesi le-hydrogen lingagcinwa njengegesi elicindezelwe noma elincibilikisiwe. I-Hydrogen iyisiphathi samandla okusetshenziselwa i-hydrogen fuel cell ezimotweni, ezitimeleni, emabhasini, noma emalolini.
I-electrolyzer eyisisekelo iqukethe i-cathode (inkokhelo engemihle) kanye ne-anode (imali enhle) nezinto ezisemaphethelweni, njengamaphampu, ama-vents, amathangi okugcina, amandla kagesi, isihlukanisi nezinye izinto. I-electrolysis yamanzi ukusabela kwe-electrochemical okwenzeka ngaphakathi kwe-electrolyzer. I-anode ne-cathode inikwe amandla yi-current ngqo futhi amanzi (H20) ahlukaniswe abe izingxenye zawo i-hydrogen (H2) ne-oxygen (O2).